चेसको बृहत् स्वरूपका एउटा नायक सुरवीर « Kathmandu Television HD
चेसको बृहत् स्वरूपका एउटा नायक सुरवीर
रुसमा दुई नेपाली चेस छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यी मध्यका विवेक थिङ, नेपालका शीर्ष चेस खेलाडी । यिनै थिङका सुरुवाती दिनका प्रशिक्षक थिए, सुरवीर लामा । यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, सुरवीरको प्रशिक्षकमय क्षमता आजको दिनमा मस्कोमा हुने चेस प्रतियोगितामा पनि देखिदैछ । विवेकको यो स्वरूपमा प्रारम्भिक जग बसाल्ने सुरवीरका अन्य धेरै पाटा छन् । सबै पठनीय पाटाहरू ।
धेरै वर्ष अघि काठमाडौँ चेस क्लबमा बालबालिकालाई जम्मा गरेर चेस सिकाइन्थ्यो । सुरवीरले विगत सम्झन्छन् । पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन नवीन तण्डुकार अघिल्लो पुस्ताका खेलाडी । एक दिन सुरवीरलाई प्रश्न गरेछन्, “ हामीलाई पछ्याउने तिमीहरू ,तिमीहरूलाई पछ्याउने को ? ” यो गम्भीर प्रश्न पछि एउटा प्रशिक्षण अभियान चलाइएको थियो । केशव श्रेष्ठ र सुरवीरले त्यसको नेतृत्व गरे । हाल गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययनरत मिलन लामा त्यो अभियानका उत्पादन हुन् । एउटा सम्भावना अहिले देखियो, नेपाली चेसमा अब आउने पुस्ता सायद विवेक श्रेष्ठ र मिलन लामाको उत्कृष्टताको होडबाजीको सेरोफेरोमा पनि रहन सक्ने छ ।
नेपालका बुद्धिमानहरूमा एउटा ठुला समस्या रह्यो । सत्य र शक्तिमा सधैँ शक्तिको पक्षमा रहने । यी बुद्धिमानहरूकै कारण हामी नेपाली गरिबीमा धकेलियौ । चेस पनि त्यस्तै हो । यो दुनियाँका धेरै बुद्धिमानहरू शक्तिकै पक्षमा रहन्छन्, सत्यको पक्षमा होइन । पृथक् रहेका सुरवीरले सधैँ सत्य छाने, शक्ति होइन । यस कारण शक्तिको कोपभाजनमा पनि परे ।
नेपाली फुटबलमा मच्छिन्द्र क्लब एउटा भिन्न पहिचान छ । साना बजारमा पैसा उठाएर व्यवस्थापन गर्दै यो क्लब व्यवसायीकरण बनको थियो । यस क्लबमा कुनै जमानामा सुरवीर सचिव थिए । क्लबमै सचिव भइसकेका श्याम श्रेष्ठ र हरि दाइ( सुरवीरकै भाषामा) यो अभियानका सुरुवाती व्यक्ति थिए । साँचो भन्दा मच्छिन्द्र क्लबको व्यवस्थापकीय स्वरूपमा यो समूहको त्यत्तिकै योगदान छ , जत्ति एकीकृत नेपालमा बिसे नगर्चीको भूमिका छ ।
दयाराम सिंह कंसकारकै परिवारका भाइ साहुबाको नेतृत्वमा मच्छिन्द्रमा भजन गाइन्थ्यो । त्यो े जमानमा सुरवीर सानै थिए, प्रसाद खानकै लागि भजनमा जाने । बिस्तारै सुरवीर ठुला भए, भजन गाइने क्रम बन्द भयो । सानो भाइ साहु बा बिरामी भए, सुरवीर सहितको समूह भेट्न गए, भाइ साहुवाले भजन सुचारु गर्न भने । त्यो समूहले साना बजारको प्रयोगबाट सामान खरिद गर्ने नयाँ जुक्ति निकाल्यो । हो,त्यसैको प्रतिफल थियो, मच्छिन्द्र क्लबको व्यवस्थापकीय स्वरूप ।
नेपाली फुटबल विवादमा थियो, फुटबलमा मात्र लगानीको अर्थ के ? क्लबहरू बिचको बहस । यस्तो भयो की, मनोज चित्रकार, श्याम श्रेष्ठ र सुरवीर तीन चेस कर्मी मच्छिन्द्रको भूमिकामा जिम्मेवार । क्लब होमियो, टिम राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप चेसमा । पहिलो पटक उनीहरू सफलल भएनन् । दोस्रो पटक मच्छिन्द्र क्लब उप विजयी भयो, टोलीको नेतृत्व श्यामले गरे, एउटा योजनाकार सुरवीर । दिन प्रतिदिन खेलमा निखारिँदै गरेका भर्खरका युवा रुपेस जयसवालमा धेरैको आँखा थिएन, तीनै रुपेस एउटा महत्त्वपूर्ण कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने सुरवीरको योजना सफल भयो । मच्छिन्द्र क्लब राष्ट्रिय उपविजेता बन्यो । एउटा, संयोग रुपेस जयसवालका लागि एउटा पनि बनेको थियो । यसै प्रतियोगिता पछि रुपेस कुनै पनि नेपालीलाई हराउन सक्ने खेलाडीको रूपमा स्थापित भए ।
नेपालमा शैक्षिक क्षेत्र खेलकुदमा चासो दिँदै थिए । सुरवीर ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा आबद्ध । संयोग यस्तो भएछ, ग्यालेक्सी स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने धेरै जना गोल्डेनगेट कलेज पुगे । प्राय सबै चेस खेल्ने यसको कारण नै सुरवीर थिए । यस पछि रमेश सिलवाल र सुरवीर लामाको भेट भयो । नेपालमा पहिलो पटक शैक्षिक क्षेत्रले चेसलाई यत्ति धेरै महत्त्व दिइयो । यसको स्वरूप आजको गोल्डेनगेट चेस क्लब हो । सुरवीर अभियान स्वरूप गोल्डेनगेट राष्ट्रिय च्याम्पियन भयो । कत्तिसम्म भने नेपालका शीर्ष १० खेलाडीमा अधिक गोल्डेनगेटमा आबद्ध रहेका छन् ।
सुरवीर लामाले लुम्बिनी राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा एपीएफको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । नेपाली खेलकुदमा विभागीय शक्तिको चेसमा चासो जगाउने सवालमा सुरवीरको भूमिका यथावत् छ । यसरी पनि भन्न मिल्छ, नेपाली चेसलाई विभाग, शैक्षिक संस्था, ए डिभिजन फुटबल क्लब सबै तीर पु¥याउने एउटा योजनाकार सुरवीर लामाको रूपमा परिचय बनेको छ ।
काठमाडौँ भिमढुंगाका दिल बहादुर तामाङ कामको सिलसिलामा सहर छिरे । छोरा सुरवीर पनि काठमाडौँमा नै रमाए । सानोमा उनी महांकाल स्कुलमा अध्ययन गरी रहेका उनले एसएसलसी भने हिमालयन स्कुलबाट गरे । सुरुमा बास्केटबल र फुटबलमा रमाउँथे । चौतर्फी छाएका उनी मखन चेस क्लबको वातावरणमा चेस खेल्न सुरु गरे । नेपाली चेसमा एउटा युग थियो, बद्रीलाल नेपाली, पुन्यमान कर्माचार्य, विलम लाल श्रेष्ठ,नवीन तण्डुकार र राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ लगायतको एउटा पुस्ता थियो ।
यसलाई तोड्ने गरी एउटा पुस्ता देखियो । केशव श्रेष्ठ, राजेन्द्र बज्राचार्य, प्रेमकृष्ण मर्हजन र विजेन्द्र सिंह लगतयले त्यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरे । त्यसै पुस्ताका प्रतिभाशाली खेलाडी रिजेन्द्र राजभण्डारीले केही समय चेस छाडे । यस बिचमा एउटा पुस्ता उदायो । सुरवीर लामा ,दिगेश शङ्कर मल्ल, उत्तम थापा लगायतको त्यो समूह थियो । यसै समूहबाट उदाए, सुरवीर ।
सन् १९९८ मा सुरवीरको पहिलो उदय भएको थियो । पहिलो पुष्पलाल स्मृति टिम च्याम्पृसीपमा उनी सहितको काठमाडौको टोली तेस्रो भयो । त्यसै वर्ष भएको युवा महोत्सव चेस प्रतियोगितामा उनी चौथो भए । अर्को वर्ष भारतमा भएको पिलो मोदी चेस प्रतियोगितामा उनी चौथो भए । भारतीय भूमिमा पाएको यो सफलता पछि उनीमा नयाँ खाले आत्मविश्वास पलायो ।
सन् २००१मा भक्तपुरमा भएको १३ औ चेस राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा छैटौँ भए पछि उनका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खुला भयो । यस अघि हेटौडामा भएको १२ औ संस्करणको च्याम्पियनसिपमा उनी छनोट मात्र भएका थिए । त्यस पछि झापाको धुलाबारीको भएको १४ औ संस्करणमा पाँचौँ भए । यसै कारण उनी स्पेनमा भएको चेस ओलम्पियाडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए । त्यसै वर्ष सुनसरीमा भएको खुला चेस प्रतियोगितामा पहिलो भए पछि उनका लागि उपाधि यात्रा खुला भएको थियो ।
यस पछि उनले काठमाडौँमा सिताराम अग्रवालको सम्मानमा आयोजित प्रतियोगितामा उपाधि जिते । यिनै सफलताका कारण उनले कतार एसियाडमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाए । ललितपुरमा भएको १५ औ राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा उपाधि जिते पछि उनी जर्मन चेस ओलम्पियाडमा छनोट भए । यत्ति मात्र होइन, सन् २००९ मा लेबनानको बेरुतमा भएको एसियन सीटीज चेस प्रतियोगितामा उनी सहित सुजेन्द्र श्रेष्ठ, मनिष हमाल र बलराम नापित सम्मिलित टोलीले गरेको प्रदर्शन अहिले पनि यादगार मानिन्छ । उनी नेपालको राष्ट्रिय च्याम्पियनको हैसियतले भारतमा एसियन जोनल चेस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पुगेका थिए ।
राखेपबाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण , फीडेको पनि प्रशिक्षण प्रशिक्षण , सुरुमा आइए धमेन्द्र कुमार र पछि लेक्चर कास्टो अबुन्डोबाट रेफ्रि प्रशिक्षण समेत उनले लिए । हाल खेलाडीको रूपमा रहेका सुरवीर नै यसमा व्यक्ति हुन् जो सँग रेफ्रि र प्रशिक्षणको टाइटल मात्र होइन, कुनै पनि कामका लागि निपुण मानिन्छन् । थाइल्यान्डमा प्रशिक्षकको रूपमा लामो समय बिताएका सुरवीरले गोल्डेनगेट चेस टिमलाई दिलाएको उचाइ त सहना गर्नै पर्छ ।
गत राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाल पुलिस क्लबले चेसमा फड्को मार्न सफल भयो । खुला स्पर्धामा पुलिसका पुरुषोत्तम चौलागाइ उपाधि जित्न सफल भए भने मनीष हमाल दोस्रो,मदनकृष्ण कायस्थ चौथो तथा सुरवीर लामा पाँचौँ भए । यसको डिजाइनर थिए, सुरवीर लामा ।
यी यावत सफलताका बाबजुद एउटा असल मान्छेको रूपमा सुरवीरको परिचय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले पनि नेपाली चेसमा कसैलाई कुनै सहयोग आवश्यकता पर्दा सम्झिइने व्यक्तिको रूपमा सुरवीर रहेका छन् । सिताराम अग्रवाल देखि यस पछिका धेरैसँग उनले सिके ।यी सबैका लागि गर्व गर्न लायक शिष्य बने उनी । अनुशासित र अग्रजलाई सम्मान गर्ने उनको आदतले अझै पनि उनका सुरुवाती प्रशिक्षक सिताराम अगवाल त भाव भावविभोर हुने गरेका छन् । यदाकदा सत्ताको आडमा मनपरी गर्नेका लागि उनी बाधक ठहरिए होलान्, तर अन्य सबै चेसकर्मीका लागि प्रिय र पूर्ण चेसकर्मीको रूपमा उनको छवि लामो समय रहन सक्ने छ ।